सबैलाई कोरोना लाग्नु पर्छ दुई चार जना म’रेर केही हुन्न! म’र्ने म’र्छन बाच्ने बाच्छन!दुर्गा प्रसाईं ( भिडियो सहित):: Mero Desh
सबैलाई कोरोना लाग्नु पर्छ दुई चार जना म’रेर केही हुन्न! म’र्ने म’र्छन बाच्ने बाच्छन!दुर्गा प्रसाईं ( भिडियो सहित)
Published on: १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०२:०६
झापा बिर्तामोड स्थित बिएनसी अस्पतालका संचालक तथा बारम्बार विवादमा आइरहने ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईको दिनहुँ काण्ड सार्वजनिक हुन थालेका छन् । दुई दिन अघि डा गोविन्द केसीका मिडिया संयोजकलाई ध म्की दिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । फेरी उनले महामारीका बारेमा दिएको अर्को भनाई भाइरल भएको छ । एक जना पत्रकारसंग गरेको उनको कुराकानी भाइरल बनाइएको हो
जसमा उनले महामारी देशभरी नै फैलनुपर्ने बताएका छन् ! उनले बिलेको उक्त अडियोलाई सेतोपाटीले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा उनले भनेका छन्, को रोना लाग्नुपर्छ, तपाईंलाई । बिएन्डसीलाई एउटा कुरा फाइदा भयो त। बिएन्डसीमा१२जनालाई भयो नि स्टाफहरूलाई एक जना को प्लाज्मा निकाल्दा चार जनालाई हुन्छ।
बिएन्डसी यस्तो स्ट्रङ अस्पताल भयो कि त्यस्ता बिरामी लाई भोलि उपचार गर्न पर्‍यो भने बिएन्डसीले सक्छ। किनभने स्टाफलाई एकपल्ट लागेपछि त अर्कोपल्ट लाग्दै न। यो जतिसक्दो बढी फैलिनुपर्छ क्या, जतिसक्दो बढी। छिटो(छिटो फैलिनुपर्छ क्या। अनि यसको काम का’र्यक्रमै सकिन्छ । यो कुरा लेख्दिनोस् मेरै ऊ दिएर, जति सक्दो चाँडो नेपालभरि फैलिनुपर्छ को रोना’
जब पत्रकारले क्या न्स रजस्ता कमजोर प्रतिरोधी भएका मानिस यसबाट म र्न सक्ने कुरा औंल्याउँछन्, उनले फेरी भन्छन्, नपचाउने मान्छे त म र्छ नि। बाँच्नैपर्छ भन्ने छ त ? छैन नि हाहाहाहा, आखिर मृत्यु त मृत्यु नै हो नि। संसारै म र्छ त अनि यहाँ बाँच्नेले के गरे,
म र्ने ले के गरे र यहाँ यो तपाईंलाई म भन्दिऊँ, यो सबै हौवा मात्रै फिँजाएको हो, डब्लुएच ओदेखि लिएर जम्मैले। म त पहिल्यैदेखि नेगेटिभ हो यो को रोनाको विषयमा। तपाईंलाई अहिले को रोना भयो भने तपाईं भाग्यसम्झनोस् म्रो कुरा हो।’